E wepụtala EndeavorOS 2020.07.15, mara mgbanwe ya na akụkọ | Site na Linux
Na nso nso ebipụtara mbipụta ọhụrụ "EndeavorOS 2020.07.15" nke na-abịa na Linux Kernel 5.7, Firefox 78.0.2, ndozi nrụnye, ndozi bug na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Maka ndị na-amaghị EndeavorOS ị kwesịrị ịma nke ahụ nke a bụ nkesa Linux nke kesara nkesa Antergos, onye akwụsịrị mmepe ya na Mee 2019 n'ihi enweghị ohere maka ndị njikwa fọdụrụnụ iji debe ọrụ ahụ na ọkwa kwesịrị ekwesị.
Ọ bụ ezie EndeavorOS n'ụzọ dị ukwuu na-agbaso otu ebumnuche dịka Antergos, EndeavorOS chọrọ ime ihe ya. Ntinye a kwesiri iweta onodu onodu n'uzo di mfe, site n'enyemaka nke Calamares installer, na enye onye oru ihe omuma di nso Arch dika o kwere mee. Kere bụ ọrụ nke onye ọrụ.
Nkesa na-enye onye nrụnye dị mfe iji wụnye Arch Linux base environment na ndabere Xfce desktọọpụ na ikike ịwụnye otu n'ime tebụl 9 dabere na i3-wm, Openbox, Mate, Cinnamon, GNOME, Deepin, Budgie na KDE.
Ndị ọzọ na-enye ohere onye ọrụ mfe wụnye Arch Linux na desktọọpụ achọrọ n'ụzọ ọ tụụrụ ime na ndebiri ya nke ndị mmepe nke desktọọpụ ahọpụtara gosipụtara, na-enweghị mmemme etinyegoro ọzọ.
Dabere na ihu ndị amaara ama na ọtụtụ ndị ọhụrụ anyị asọpụrụ ịnabata n'ime obodo anyị n'afọ gara aga, echere m na ọ dị mma ịsị na anyị nwere ọganiihu na ebumnuche ahụ.
Otu afọ agafeela nnukwu mmụta na ebumnuche ịma aka ndị siri ike iru, mana anyị meriri ha agbanyeghị ma ugbu a oge eruola EndeavorOS ị banyeghachi na ikuku wee kpọsaa na ọ bụ ejima mara mma iji kwusaa ọdịda ya. isi.
1 EndeavorOS 2020.07.15 Igodo Ọhụrụ
1.1 Budata EndeavorOS 2020.07.15
EndeavorOS 2020.07.15 Igodo Ọhụrụ
Na ụdị ọhụrụ nke nkesa a dịka anyị kwuru na mbido otu n'ime ihe omuma ya bu ihe ndozi na nhazi ọ bụkwa na ụdị ọhụrụ a eỌdịdị na mmetụta nke installer Calamares dị ka ọ ka mma.
Mgbanwe mbụ a ma ama na installer bụ na nke a emelitere na nsụgharị 3.2.26 nke ya na onye nhazi ugbu a Ọ nwere nhọrọ nhazi GEOIP, ya mere enwere ike ịhazi mpaghara ahụ na mbụ dịka adreesị IP, na mgbakwunye na nke ahụ edozi ụfọdụ nsogbu ngosipụta na mpaghara oge.
N'aka nke ọzọ, Ọdịdị gụnyere usoro ntọala izizi dị mfe na kọmpụta Nnọọ, nke ị nwere ike ịrụ arụmọrụ dị ka ihichapụ oghere nke ngwugwu arụnyere, ịwụnye nchịkọta ọzọ na kernel Linux site na ebe nchekwa Arch, na-agbakwunye bọtịnụ iji mezuo iwu na ederede.
Banyere usoro nchịkọta ọhụrụ version gụnyere emelitere nsụgharị nke Linux kernel 5.7 nke ejiri otutu oganihu dị ka FS exFAT mmejuputa, modul bareudp maka ịmepụta tunnels UDP, pointer authentication based protection for ARM64, ikike itinye mmemme BPF na ndị na-achịkwa LSM, mmejuputa ohuru nke Curve25519, onye na-ege mkpọchi agbachi, nkwado BPF, n'etiti ndị ọzọ.
Anyị nwekwara ike ịchọta ụdị nke Isiokwu 20.1.3 nke gụnyere ndozi ndozi dịgasị iche na Vulkan API, dị iche iche Intel ANV Vulkan ọkwọ ụgbọ idozi, yana a dịgasị iche iche nke mmelite na-aga n'ihu mwekota akụrụngwa.
Ọzọ nke nchịkọta nke emelitere na guzo site na ọkwa bụ ụdị ọhụrụ nke Firefox nke 78.0.2, nke jikọtara ụdị mmezi nke ngalaba ọhụrụ ahụ nke emepụtara ụbọchị ole na ole gara aga. Nke a na ụdị ihe pụtara ìhè bụ na enwere ike iweghachite windo mechiri emechi, ndozi maka WebRender, mgbanwe na mkpesa nchedo yana kwa na obu udi LTS.
Site na atụmatụ maka ọdịnihu dị nso, e guzobekwara mgbakọ maka ngwaọrụ dabere na ụlọ ọrụ ARM.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya Banyere ụdị nkesa ọhụrụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa dị na ọkwa ọkwa.
Budata EndeavorOS 2020.07.15
Maka ndị nwere mmasị ịnata onyonyo nke sistemụ ahụ, ha nwere ike ịga na webụsaịtị gọọmentị nke nkesa na ngalaba nbudata ha ga-ahụ njikọ ndị kwekọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » E wepụtala EndeavorOS 2020.07.15, mara mgbanwe ya na akụkọ ya
Otu n'ime ọtụtụ distros, na mgbe ị na-atụghị anya ya, ọ ga-apụ n'anya, n'ihi na ọ na-ewe ọtụtụ mgbalị iji jigide distro na n'ikpeazụ, na-ejigide ya site na nwamba 4, oge ọ na-etinye ha nke ukwuu nke na ha mechara hapụ ya. Achọrọ m ịkụ nzọ na nchekwa, na ndị nne nke ndụ niile. Debian. Fedora. Arch, Opensuse, wdg, ndị ahụ ga-anọ ebe ahụ.
Ihe Endeavour bara bụ ntinye dị mfe nke Arch na inweta ezigbo arch. Arch dị mgbagwoju awụnyere na anaghị m aga nke ọma. Manjaro anaghị emelite otu ihe ahụ ma dị iche. Ọ bụrụ na ọ na-amasị anyị ịtụgharị, gụgharịa ihe omume na ihe niile, dị ugbu a, ma anyị chọrọ Arch na-enweghị mgbagwoju anya n'ihi na ọ dị modulu, na-enweghị bloatware, ọ bụ ezigbo nhọrọ. Dejupụta oghere nke Anteriorgos hapụrụ.
Zaghachi Miguel O.
Sway 1.5 biara na wlr ndakọrịta, mmeputa na sistemụ na-enweghị ihe nlele na ndị ọzọ